Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airport » Pegasus ụgbọ elu jikọtara ọdụ ụgbọ elu Budapest na Istanbul, Turkey
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Hungary na -agbasa akụkọ • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Turkey na -agbasa News • Akụkọ dị iche iche
Routezọ ahụ amaliteghachi njikọta n'etiti isi obodo Hungary na isi obodo Turkey nke kachasị Europe na Asia, gafee Bosphorus Strait
Turkish Pegasus ụgbọ elu na-efeghachi Budapest Airport
Gbọelu ọnụ ala nke Turkey ga-arụ ọrụ njikọ 1,080km ya na ụgbọ mmiri ya nke oche 180-A320s
Na mbu, a ga-eduzi ụgbọ elu Budapest-Istanbul ugboro abụọ kwa izu
Gbọ elu si Budapest na Sabiha Gӧkçen Airport nke Istanbul alọghachila Pegasus Airlines. Routezọ ahụ amaliteghachi njikọta n'etiti isi obodo Hungary na isi obodo Turkey nke kachasị Europe na Eshia gafee Bosphorus Strait.
Onye na-ebu ọnụ ala Turkey ga-arụ ọrụ njikọ 1,080km ya na ụgbọ mmiri ya nke oche 180-A320s, na mbido ugboro abụọ-kwa izu ka ndị njem na ndị azụmahịa na-anabata nlọghachi ahụ.
“Iweghachi azụmaahịa n’enweghị nsogbu ọ bụla bụ ihe dị mkpa na ọdụ ụgbọ elu anyị, ọ dịkwa oke mma ịnabata Pegasus ụgbọ elu laghachi Budapest,” ka ọnụ na-ekwuchitere ya kwuru Ọdụ ụgbọ elu Budapest.
“Inghaghachi ụzọ Istanbul a ma ama ga-enye azụmahịa na oge ezumike, yana nnabata nke ndị ọbịa n’obodo anyị mara mma. Mepee njikọta, ịkwalite azụmaahịa na njem, ebe anyị na-enye ndị ahịa anyị njikọta, ịdị mma na nhọrọ bụ ebumnuche anyị. ”
ọdụ ụgbọ elu Budapest Pegasus Airlines